श्रीमानले यति राम्रो छोरीलाई समाप्त गरेपछि रुँदै आइन श्रीमानको कर्तुत यस्तो थियो भन्दै (भिडियो) - Nepali in Australia
January 28, 2021 EditorLeaveaComment on श्रीमानले यति राम्रो छोरीलाई समाप्त गरेपछि रुँदै आइन श्रीमानको कर्तुत यस्तो थियो भन्दै (भिडियो)
अर्घाखाँची । सुन्दापनि पत्याउनै नसकिने घटना घटेको छ अर्घाखाँचीमा । आफ्नै बाबुले २ वर्षकी दुधे छोरीको ज्या’न लि’एका छन् । त्यो पनि सा’ह्रै नि’र्मम तरिकाले । उनले घरमा कोही नभएको मौका छो’पेर आफ्नै २ वर्षे छोरी श्रृष्टिको ज्या’न लि’एका हुन् । नाबालक छोरी ‘मा’री ‘स’केपछि बाबु सन्तोष नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा गई आफुले गरेको अ’परा’ध सजिलै स्वीकार पनि गरेका छन् ।
आखिर किन सन्तोषले आफ्नै सन्तानको ज्या’न लि’ए त ? यो प्रश्न गर्दा जवाफमा उनका बाबुले छोरा बुहारीको स’म्बन्ध ठी’क नभएको कारण बताउँछन् । आखिर सन्तोष र कमलाको मागी बिबाह पनि भएको थिएन । उनीहरुले एकअर्कालाई मन पराएर बिहे गरेका थिए । लभ म्यारिज गरेका सन्तोष र कमलाबाट जन्मिएकी थिईन् सुन्दर छोरी श्रृष्टि । जस्लाई आफ्नै बाबु सन्तोषले कल्पनासम्म गर्न नसकिने गरी आफ्नै घरमा मा’रेका छन् ।
यो खबरले यतबेला अर्घाखाँची मात्र नभई पुरै सामाजिक सञ्जाल नै ता’तेको छ । छोराले दुधे नातिनीको ज्या’न लि’एपछि बा’बुले आफ्नै छोरालाई अ’परा’धि भन्दै सजायको माग समेत गरेका छन् । मृतक श्रृष्टिको हजुरबुवाले छोरा बुहारीको स’म्बन्ध बि’ग्रीएको हुनाले नै नातिनीले ज्या’न गु’मा’उनु परेको बताउँछन् । सन्तोषसंग झ’ग’डा गरेर माईत गएकी कमलालाई घर फर्काउन नसकेका सन्तोषले रि’सको झो’कमा आफ्नै छोरी श्रृष्टिको ज्या’न लि’ए’को उनका बाबुले बताएका छन् ।
छोरिको मृत्यु पछि माइतमा भएकी छोरीकी आमा पनि अहिले रुँदै मिडियामा आएकी छन् । छोरीको मृत्युको खबर पाउने बित्तिकै उनि गाडी रिजर्व गरेर परिवारसहित घटनास्थलमा पुगेकी थिईन । उनीहरु घरमा केहि घण्टा बसेर पुनः फर्किएको बताएकी छन् ।
बिदेशमा हुनुहुन्थ्यो म बिरामी भए भनेपछि उंहा आउनु भएको हो । उहा विदेश बाट आएर नेपालमा म संग बिवाह भएको हो भन्दै उनले परिवारलाइ न सोधी मैले भागेर बिवाह गरेकी हुँ । श्रीमानको आमासंग पनि कुराकानी हुन्थ्यो आमाले पनि छोरो राम्रो छ मेरो घरमा छोरी छैन तिमीलाई छोरी जस्तै गरेर राक्छौ भनेपछि मैले बिवाह गरेकी थिए ।
बिवाह गरेको १, २ महिना त राम्रै थियो त्यसपछि उनले मापसे गर्दै आउने समयमा घरमा न आउने राति ११, १२ बजे मात्रै घरमा आउनु हुन्थ्यो । पहिले मलाई छुट्टीमा आएको भनेर झुट बोल्नु भएको रहेछ । छुट्टीमा आएको भनेको त क्यान्सिल नै गरेर आउनु भएको रहेछ । सधै घरमा मैले काठमाडौंमा भिषा लगाउन जान्छु भनेपछि परिवारले पनि जान दिनुहुन्थ्यो । घर परिवारमा पनि एकदमै झुट बोल्ने, घरपरिवारलाई न सोधी दार पात पनि बेचिदिने ।
आमाले पनि पुल्पुलाएर राखेपछि छोरो बिग्रेको बताएकी छन् । मलाई पैसा पनि नदिने तास निकै खेल्ने मुखमा जे आयो त्यहि बोल्ने यसले गर्दा म निकै हैरानी थिए । बाँकि भिडियोमा हेर्नुहोस
यस्तो ड’र ला’ग्दो सेतिको पुलबाट किन हा’ म फाले ५० बर्षीय जितबाहदुरले ?
म्यादी प्रहरीको लागि भर्ना खोलिँदै, तलब र अवधि समेत बढाइयाे ।